အန်ကောဝပ် Angkok Wat အပိုင်း ၅ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » အန်ကောဝပ် Angkok Wat အပိုင်း ၅
အန်ကောဝပ် Angkok Wat အပိုင်း ၅
Posted by ဆူး on Jan 10, 2011 in News, Photography, Travel | 13 comments
လူတွေ ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်မှု ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဗုဒ္ဓဆင်းတု တော်ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုဘုရား အရှေ့က တိုင်လုံးမှာ ရေးထားတဲ့ မြန်မာစာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထင်မိတာကတော့ ကမ္ဘာအမွေ အနှစ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားတာ မပြုလုပ်ခင်က ကုန်ကူးတဲ့ ကုန်သည်တွေ သင်္ဘောနဲ့ လာပြီး ရောက်ရှိကြောင်း စာရေးသွားတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထိုလက်ရေး စာထွင်း အောက်မှာ တော့ တရုတ်စာ ရေးထားတာ ရှိပါတယ်။ ထိုအပေါ်မှာ ထပ်ထွင်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကလည်း မူရင်း တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အရင်တုန်းက ရေးထားတဲ့ ဟာတွေဘဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါကတော့ ထွင်းထု ထားတဲ့ အစစ်အမှန် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဟိန္ဒူ ပုံစံဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။
ခေါင်းမိုးမှာ ရှိတဲ့ နဖူးစည်းမှာ ရှိတဲ့ ပုံတွေပါ။ ပုံတွေ တိုင်းမှာတော့ ရာဇ၀င်တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။
ပျက်စီးပြီး ပြုတ်ကျတဲ့ အပိုင်းအစတွေကို လေ့လာနိုင်အောင် စုပုံထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ပြုတ်ကျလာတဲ့ နေရာမှာ အကုန် မပျက်စီးသွားအောင် ကျောက်တုံး အစားထိုးပြီး ဒုတ်ထောက် ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံစံ မပျက် ထားတာ ဆိုတော့ ကောင်းတယ်လို့ ပြောရမှာဘဲ.. အစားထိုးတာလည်း သိသာတယ် ပုံစံလည်း မပျက်ဘူး။
အစားထိုး ကျောက်တုံးကိုတော့ မီးသင့်ကျောက်လို့ ပြောပါတယ်။ ဂ၀ံကျောက်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဘုရားပုံတော်မြင်တော့ တရုတ်ပြည်က စီချွန်ပြည်နယ်က မဟာဘုရားကြီးပုံကို တင်ပေးဖို့ သတိရသွားတယ် …
ဓါတ်ပုံတွေ ပြန်ရှာပြီးမှ တင်ပေးအုန်းမယ် ..
ကောင်းတယ် အမ တင်ပေးပါ.. မတွေ့ဘူးတာတွေ တွေ့ရတာပေါ့.. အပြန်အလှန် ဗဟုသုတ ဖလှယ်တော့ အကျိုးများတာပေါ့။
ဓါတ်ပုံတွေကတော့ ထိပ်တန်းပဲဗျို့။ ကြောင်ကြီးလည်း အားကျမခံ ခရီးသွားပို့စ်တခုတင်ရအောင် အင်္ဂါဂြိုလ်ကို သွားမလို့လုပ်နေတယ်။ စပွန်စာလုပ်ချင်သူများ ရှိရင်ပြောကြပါ။ သဂျီးမင်းကတော့ အန်တီဆူးကို ငွေ၈၀ကျပ်အတွက်နဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားအထိသွားပေးလို့ သီရိသူ့ဓါးမဘွဲ့ပေးဖို့ ပြင်နေတယ်ကြားတယ်။ ဒါထက် ကင်မရာက ပြန်တွေ့ပြီလား။ ရုတ်ရုတ် ရုတ်ရုတ်နဲ့ လေဆိပ်ကို အသေရဖျက်မယ်တော့ မကြံနဲ့နော်။ စစ်ထဲပို့မဲ့ ပထမဆုံးအသုတ်ထဲ ပါသွားမယ်။
ကိုကြောင်ကြီးက ဆူးကို ကင်မရာတစ်လုံးထဲရှိတယ်လို့ ထင်လို့လား … ကင်မရာတစ်လုံးပျောက်လည်း ပုံတွေအကုန်မပျောက်အောင် အမျှော်အမြင်ကြီးကြီးနဲ့ စီစဉ်ထားလို့ အခုလို ပြနိုင်တာပေါ့ ….
ဒီမှာတော့ ဘာမှ တင်မရပါ။
တော်တော် စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာပဲနော်…. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အတွေ့အကြုံကို Share လုပ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါပဲ…
ဦးကြောင်ကြီးရေ ကင်မရာ ၂လုံးယူသွားပါတယ်။ လူပုံ အလှရိုက်တဲ့ ကင်မရာ အသစ်လေး ပါသွားတာပါ။ ဟိုရိုက် ဒီရိုက် တောင်ရိုက် မြောက်ရိုက် လုပ်တဲ့ ကင်မရာ အဟောင်းကလေး ကတော့ ကျန်နေခဲ့တယ်။ ပုံတွေကို သိတာနဲ့ ယှဉ်ပြီး ဂူဂဲမှာ ပြန်ကူးပြီး ပိုစ်တခု ဖြစ်အောင် ဖန်တီးပါတယ်။ လူပုံ ရိုက်တဲ့ ကင်မရာ ကတော့ ပြန်မရပါဘူး။
အလှူရှင် တဦးချင်း မဖိတ်ခေါ်ပါ။ ၀င်ကြေး ၂၀ ယူထားပြီးသား ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဘာမှ ထပ်မတောင်းပါ။ အန်ကောဝပ် နယ်နမိတ်ကို ရှေးဟောင်းနယ်မြေ သတ်မှတ်တဲ့ အတွက် အများပိုင် ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒီအတွက် နိုင်ငံက ၀င်ကြေးယူယုံက လွဲလို့ ဘာမှ ပြုပြင် မွန်းမံတာ ပြုလုပ်စရာ မလိုပါဘူး ပြုပြင်မယ်ဆိုရင် အဖွဲ့အစည်းက လာပြင်ပါတယ်။
၀င်ကြေးများများယူတာလဲ တစ်နည်းတော့ကောင်းတာပဲ … တရုတ်ပြည်မှာလဲ ဘယ်မှာမဆို ၀င်ကြေးများတော့ အထဲမှာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းထားတာ အရမ်းကောင်းတာပဲ …
အန်ကောဝပ် ၀င်ကြေးက ကမ္ဘောဒီးယား အစိုးရက အသားတင် သိမ်းယုံပါဘဲ။ ပြုပြင် မွမ်းမံ စရိတ်စက အမွေအနှစ် သတ်မှတ်တဲ့ အတွက် ယူအန်ကလား မသိဘူး အကုန်အကျ ခံပေးတာပါ။ ပြုပြင်တယ်ဆိုရင်လည်း တတ်နိုင်သလောက် တူနိုင်အောင် လုပ်ရပါတယ်။ မလုပ်မှာစိုးလို့.. ပေးမပြင်တာပါ။
အန်ကောဝပ်က ပိုစ် ထပ်တင် စရာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။
ပိုစ်တင်လို့ အဆင်မပြေသေးလို့.. တင်မယ်.. ရေးစရာတွေ အများကြီး ကျန်သေးတယ်။